Pizza Hut ရဲ့ 369 Campaign လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ ပရိုမိုးရှင်းအသစ် 1343 views
ဟိုတလောကPizza Hut Personal Pan Pizza ပရိုမိုးရှင်းတုန်းက MyLann ဘော်ဒါတွေကိုရှဲပေးခဲ့သေးတယ် နော်။ အခုလည်းလာပြီနောက်ထပ်တစ်ခု… ဒီတစ်ခုကပိုတန်တယ်…
Pizza Hut ရဲ့ အရင်တုန်းကနဲ့မတူတဲ့ပရိုမိုးရှင်းလေးက ဘာလဲဆိုတော့…..
ဈေးနှုန်းတွေကိုက သုံးထောင်၊ ခြောက်ထောင်၊ ကိုးထောင်တဲ့…. စိတ်ဝင်စားစရာတော့ ကောင်းသားနော်…
သူကဒီလိုပါ…ပီဇာကိုမှ Large Size ဆိုရင် (၉၀၀၀)၊ Regular Size လောက်ဆို (၆၀၀၀)၊ Personal Pan ဆိုရင် (၃၀၀၀)နဲ့ရနိုင်မှာ ဆိုတော့ ဒီပရိုမိုးရှင်းလေးကပိုပြီးတန်သွားတယ်။ ပုံမှန်ဈေးတွေကတော့အခု ပရိုမိုးရှင်းဈေးတွေရဲ့နှစ်ဆလောက်ရှိတာပေါ့နော်… ပီဇာစားဖို့လူအရမ်းစုဖို့မလိုတော့သလိုလူတိုင်းလည်းအချိန်မရွေး တစ်ယောက်ထဲဆိုရင် တောင်စားလို့ရသွားတယ် ဆိုတော့အက်မင်တို့တော့ ဒီပရိုမိုးရှင်းလေးကို သဘောကျတယ်။ နောက် အဲ့ဒီအပြင် ဒီ (၃၀၀၀)၊ (၆၀၀၀)၊ (၉၀၀၀)အဲ့ဒီပီဇာတွေ စားတယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် Add on လုပ်လို့ရတာက Chicken Wings ဆိုရင် တစ်ပွဲကို (၁၀၀၀)ကျပ်။ နှစ်ခုပါတယ်။ တစ်ယောက်စာအတွက်အနေတော်ပဲပေါ့…. နောက် Fried Squid Rings with French Fries ဆိုရင် (၃၀၀၀)ကျပ်နဲ့ရနိုင်မှာတဲ့။ ဒီ Squid Rings ကမှာပါတဲ့ပမာဏကတူတူပဲ ဈေးနှုန်းက(၄၅၀၀)ကနေ(၃၀၀၀) လျှော့်ပေးလိုက်တာ။ ဆိုတော့ ပိုတန်သွားပြန်တယ်ပေါ့။ ((ဒါပေမယ့်လည်း ပရိုမိုးရှင်းပေးထားတဲ့ထဲကတစ်ခုခုဝယ်မှသာ Add On လုပ်လို့ရမှာတဲ့နော်))
နောက် (၃၀၀၀)၊ (၆၀၀၀)၊ (၉၀၀၀)မှာဆိုရင် ရနိုင်တာက Pepperoni & Cheese, Chicken Hawaiian, Hawaiian Paradise ဆိုပြီး Pizza Hut မှာလူကြိုက်အများဆုံး Taste သုံးမျိုးရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအပြင် Stuffed Crust ဆိုရင် (၃၀၀၀)နဲ့ Golden Stuffed Crust ဆိုရင် (၄၅၀၀)ထပ်ထည့်ပြီးလည်းစားနိုင်သေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ချိစ့်ကြိုက်တဲ့ကိုကိုမမတွေအတွက်တော့အမိုက်ပဲ။
ဒီပရိုမိုးရှင်းလေးရဲ့အားသာချက်နောက်တစ်ခုက အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဖူး။ ဆိုလိုတာကအရင် Personal Pan Pizza ကို(၄၅၀၀)နဲ့ရောင်းတုန်းကနေ့လည်ဘယ်နှစ်နာရီကနေ ဘယ်နှစ်နာရီဆိုပြီးလာစားမှရတာ။ အခုတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖူး။ ဆိုင်စဖွင့်တဲ့အချိန်ကစ ပိတ်တဲ့အချိန်ထိကိုပေးသွားမှာဆိုတော့ ကြိုက်တဲ့အချိန်သွားစားလို့ရပြီ။ ဒီပရိုမိုးရှင်းလေးက မတ်(၇)ရက်ကနေ အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲချပေးထားတာနော်…Promotion ပြီးဆုံးရက်ကိုတော့ Pizza Hut Myanmar Facebook Page လေးမှာပြန်လည်ကြော်ငြာပေးသွားမှာမို့လို့ နောက် Promotion အသစ်တွေရှိရင်လဲသိရအောင် See First လုပ်ထားလိုက်ဦးနော်… ဟီး… ကိုယ်တွေလည်းနောက်တစ်ခါသွားထပ်စားရမယ်
ဒီတစ်ခေါက်ကိုယ်စားခဲ့တာတော့ ဓမ္မစေတီလမ်းပေါ်က Market Place, City Mart ဘေးကဆိုင်မှာပါ။ ဆိုင်က မနက်(၁၀)နာရီကနေည(၁၀)နာရီအထိဖွင့်တယ်။ ပရိုမိုးရှင်းကတော့ Pizza Hut ဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာ ရနိုင်မှာပါ။
Chicken Hawaiian ဆိုရင် နာနာတ်သီးလေးကလည်းပါသေးတယ်။ ကြက်သားနဲ့ချိစ့်ပါတဲ့အတွက် မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ဆိမ့်ဆိမ့်လေး။
Hawaiian Paradise ကဆိုရင် သူကတော Ham လေးနဲ့ဆိုတော့ တစ်မျိုးစားကောင်းတယ်ပေါ့။
Pepperoni & Cheese သူကတော့ Pepperoni ကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့ ချိစ့်ကလည်းမွှေးမွှေးဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့။ အစာပလာသိပ်အများကြီးမပါပဲ ပုံစံရော၊ အရသာပါရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ စားကောင်းတယ်။
နောက် Squid Rings သူကတော့ Appetizer အနေနဲ့စားတာပေါ့နော်။ ကြွပ်ကြွပ်လေးနဲ့ ရွရွလေး။ ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့စားလိုက်တာခဏလေးနဲ့ပဲကုန်သွားတယ်။ သူနဲ့ပါတဲ့ Sauce လေးလည်းမိုက်တယ် သူကပုံမှန်ဆို(၄၅၀၀)၊ Promotion Item နဲ့တွဲစားရင်တော့ (၃၀၀၀)နဲ့ရမှာပါ။
#MyLann #Online_Restaurant_Directory #Online_Food_Guide #Food_Review_in_Yangon #Foodie_Myanmar #Pizza_Hut #Promotion